‘भद्रगोल’बाट किन बाहिरिए पुराना कलाकार ? कारण यस्तो छ - हरपलको ताजा खबर
‘भद्रगोल’बाट किन बाहिरिए पुराना कलाकार ? कारण यस्तो छ
काठमाडौं / विगत ६ बर्ष देखि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको चर्चित हाँस्यटेलिसिरियल भद्रगोलबाट सुरुवाती दिनदेखिनै देखिँदै आएका कलाकारहरु बाहिरिएका छन् । मिडिया हव एजेन्सी र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा निर्माण हुँदै आएको भद्रगोल केही समय बन्द भएपनि पुन सञ्चालनमा आएको छ। तर,पुराना र चर्चित अनुहारहरु भने देखिएका छैन ।
नयाँ कलाकार कसरी भित्रियो ?
जिग्रि पाँडे सँगको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि नेपाल टेलिभिजनलाई हरेक हप्ता पुरानो भाग पठाउँदै प्रसारण गर्न लगाउनु पर्ने भएकोले नयाँ कलाकारलाई बिना सम्झौता र हतारमा भित्र्याउनु परेको सोम धिताल बताउँछन् । नयाँ भागलाई ज्योति काफ्ले र अशोक धितालले लेखन तथा निर्देशन गरेका हुन् ।
पुराना कलाकार भद्रगोलमा देखिने सम्भावना कति ?
मिडिया हब सहमतिमा अगाडि बढ्न तयार देखिन्छ, सोम धिताल भन्छन् : हामी गर्छौं भनेर आएको खण्डमा ढोका सधै खुल्ला छ, केहि हिसाब किताब पनि बाकि नै छ ।
अन्ततः भद्रगोलका पुराना कलाकारहरुले यहि असोज २ गतेबाट नयाँ सिरियल लिएर आउने पक्का भइसकेको छ । नयाँ सिरियलको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन ।